Hutano, 09 Zvita 2018
Svondo 9 Zvita 2018
Zvita 04, 2018
Varwere Votambura Zvichitevera Kuramwa Mabasa kwaVana Chiremba
Vamwe varwere muBulawayo vange vachitadza kurapwa pazvipatara zvikuru zviviri zvehurumende zviri muguta iri apo kuramwa basa kwaana chiremba kwapinda muzuva rechina neChipiri.
Zvita 03, 2018
Zimbabwe Yocherechedza Zuva reVakaremara
Pasi pose pacherechedza zuva ranhasi sezuva revanhu vakaremara. Muna 1992, United Nations yakadzika 3 Zvita kuti rive zuva gore negore rekucherechedza vakaremara.
Kuramwa Mabasa kwavanaChiremba veHurumende Kwokanganisa Mashandiro eZvipatara Zvikuru
Vanachiremba vemuzvipatara zvehurumende vapinda muzuva retatu vachiramwa mabasa, izvo zvaita kuti zvipatara zvehurumende zvitore matanho anosanganisira kuvhara mamwe mapoka anoona varwere, kuendesa kumba varwere vanokwanisa kurapwa vachibva kumba.
Zvita 02, 2018
Vanhu Vapfumbamwe Vanoshaya muTsaona kuChecheche kuChipinge
Tsaona iyi inonzi yaitika pakati perhorhi yekambani yeGreen Fuel yanga yakatakura nzimbe ne ombi yanga yakatakuta vanhu gumi nevanomwe iyo yanga ichibva kuChiredzi ichienda kuChipinge.